‘संघर्ष बुझ्या छु ! लगानीकर्ता जोडिए लाखौंलाई स्वरोजगार बनाउन सक्छु’ : युवा उद्यमी सम्राट - नेपालबहस
‘संघर्ष बुझ्या छु ! लगानीकर्ता जोडिए लाखौंलाई स्वरोजगार बनाउन सक्छु’ : युवा उद्यमी सम्राट
| २०:३९:०९ मा प्रकाशित
सफलता केलाई मान्ने ? सफलता मापन कसरी गर्ने ? सुनाउन लायक कथाहरु त्यसै बन्दैनन् । कथाहरु बन्नका लागि पात्र चाहिन्छ । हाराहारी ७ अर्ब जनसंख्यामा हरेक पात्रको आफ्नै कथा छ, कति लेखिन्छन, कति लेखिदैनन । कति सुनाउन लायक हुन्छन त कति सुनाउन लायक हुँदैनन् । त्यहि भीडमा सुनाउन लायक कथा बनाउँदै उदाउँने एउटा नाम हो, युवा उद्यमी सम्राट थापा ।
प्रदेश १ को पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको भित्री गाउँमा हुर्किएका सम्राट अहिले ‘नेपाल इन्फो’का व्यवसाय बिकास प्रमुख, ‘एभरेष्ट पोलेसी इन्स्टिच्युट’का डाइरेक्टर, ‘सहयोगी पसल’ का प्रमुख र विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय छन् । सानो उमेरमा घर छाडेर आफ्नै साम्राज्य र कथा बनाउँछु भन्ने थापाको संघर्ष कम्ता प्रेरणादायी छैन् ।
१७ बर्षको उमेरमा सामाजिक संस्था ‘सेभ ह्युमन एण्ड ह्युमानिटी’ सुरु गर्दै त्यही उमेरमा ‘युथ फर ब्लड’ को सुनसरी अध्यक्ष, १९ बर्षमा मिडिया हाउस संचालक भएका सम्राटले अहिले काठमाडौं, बुटवल, नेपालगन्ज, इलाम, पथरी, बिराटनगरमा आफ्नो कम्पनीको शाखा बिस्तार गरेका छन् भने लकडाउन हुँदा समेत ‘सहयोगी पसल’ नामक अनलाइन पसल संचालन गरी सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छन । थापाका अनुसार “अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग भाग्ने होइन सामना गरेर त्यसलाई अवसरमा परिणत गर्ने हो ।”
अफिसबाट राति १० बजे इटहरी चोकमा चाट खाएर कोठा पुग्दा घरबेटीले गेट नखोल्दिंदा धेरै दिन गोरखा गल्लीमा रात बिताएको तितो यथार्थ सुनाउछन् थापा । कहिले ग्याँस त कहिले चामल सकिएर दुःख सहँदै हिम्मतका साथ आगाडी बढेका थापाको व्यावसायिक सुरुवात झनै रोचक छ । दिमाग र पेपर भरि योजना बोकेर लगानी खोज्न भौतारिंदा अनि घन्टौ योजनाहरु सुनाएर खिस्स परि फर्किएको, कहिलेकाँही यो सब छाडेर विदेश जाने योजना बुन्दै कोठा पुगेको
नेपालमा धेरै समाजसेवी छन् । जसले सामाजिक सेवा र धर्मका लागि लाखौं करोडौं दान गर्छन तर अहिले देशलाई त्यस्तो समाजसेवी चाहिएको छ जसले युवामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बन्न सकोस् । लगानीकर्ता भए लाखौंलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने दावा समेत थापाको रहेको छ । नेपाल इम्फो, उधमी दिदी, आइडीयालय, सहयोगी पसल जस्ता अरु थुप्रै योजनाका लागि लगानीकर्ता पर्खिएर बसेका थापा २०७३ सालमा तेह्रथुमबाट इटहरी आएका हुन । इटहरी आएर कुटुम्ब व्वाइज होस्टलमा तरकारी ल्याउने र बिल इन्ट्री गर्ने थापा बिस्तारै सामाजिक तथा व्यावसायिक रुपमा आगाडी बढे ।
अफिसबाट राति १० बजे इटहरी चोकमा चाट खाएर कोठा पुग्दा घरबेटीले गेट नखोल्दिंदा धेरै दिन गोरखा गल्लीमा रात बिताएको तितो यथार्थ सुनाउछन् थापा । कहिले ग्याँस त कहिले चामल सकिएर दुःख सहँदै हिम्मतका साथ आगाडी बढेका थापाको व्यावसायिक सुरुवात झनै रोचक छ । दिमाग र पेपर भरि योजना बोकेर लगानी खोज्न भौतारिंदा अनि घन्टौ योजनाहरु सुनाएर खिस्स परि फर्किएको, कहिलेकाँही यो सब छाडेर विदेश जाने योजना बुन्दै कोठा पुगेको, बिहान उठ्दा उही जोशका साथ फेरी सम्भावना बटुल्दै हिंडेको त, कतै एक वर्षमा डबल हुन्छ ‘जग्गामा लगानी गरे हुन्छ’ भन्नेहरुको, लगानी पाउन ग्यारेन्टी बस्ने एकजना पनि अगाडी नहुँदाको दुःख र आज त्यही दुःखले आर्जन गरेको चिनजान र व्यापारको कम्बिनेशन बडो सुन्दर देखिन्छ ।
महात्मा गान्धीको भनाई छ, “पहिले वास्ता गर्दैनन्, त्यसपछि हाँस्छन अनि लडाउन खोज्छन त्यसपछि तपाईले जित्नुहुन्छ” मैले त्यही भनाईलाई आत्मासात गर्दै यहाँसम्म आए, अझै धेरै गर्नुछ । सुरुमा व्यावसाय सुरु गर्दा ऋण लिएर तिर्न नसक्दा गाली तथा नराम्रा शब्द सुन्नुपर्थ्यो, अहिले नि उस्तै छ । सबैले सबैको सपनाको इज्जत गर्न सक्दैनन र गर्दैनन् पनि । तर त्यही हिम्मतले सबै कुरा जित्दै अगाडी बढ्न सक्नुपर्छ ।
नेपाल इन्फो देशका ४०० वटा स्थानीय तहमा संचालन गर्न सकिने व्यावसायिक योजना हो र यो अगाडी पनि बढिरहेको छ । उनी भन्छन्, “युवानै देश परिवर्तन गर्ने औजार हुन्, औजारमा धार लगाउन सबैले युवामा लागनी गर्नुपर्छ जसले गर्दा देश आर्थिक रुपमा समृद्ध हुनसक्छ । २०७३ सालमा इटहरीका सामाजिक अभियानकर्मी ‘किप इटहरी क्लीन’का अभियान्ता दिब्यराज गुरुङसँग भेट भयो ।
गुरुङले उद्योग बाणिज्य संघ, इटहरीका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवस पोखरेलसँग मिलेर संचालनमा ल्याउनुभएको ‘शब्दशक्ति मिडिया प्रा.लि.’ संचालन गर्दा त्यो बेला मलाई पत्रकार दाईहरुले ‘लगानी गर्ने बाहेक अन्य मानिसको विज्ञापन आउँदैन होला’ भनेर गिज्याउथे । आज आफै ३ बर्ष पछि अनलाइन संचालन गरिरहेका छन् । अहिले थाहा हुँदैछ, म वहाँहरुभन्दा ३ बर्ष अगाडी रहेछु ।
संघर्षका कुरा सुनाउदै गर्दा सम्राट भावुक हुन्छन् । कक्षा १२ सकेर बिराटनगरबाट तेह्रथुम फर्किएको म घरबाट डाक्टर बन्नका लागि आमाबुबा ले भनी रहे एसो त उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउनका लागि पनि धेरै कोशिश भयो तर नेपालमा केही गर्ने हिम्मतले त्यताको बाटो रोजेन तर के गर्ने भन्ने टुङ्गो उनलाई नि थाहा थिएन ।
छोरो डाक्टर अनि विदेश नजाने भएपछि बुबाले नेपाल प्रहरी बन्नका लागि नत्र गाउँमै शिक्षक बन्नका लागि दिनरात अनुरोध गर्न थालेपछि बाध्य भएर आफुले नेपाल प्रहरीको फारम भरेको र प्रहरी बन्नका लागि कम्प्यूटर सिक्दा विशेष सुबिधा पाउने भनेर आमालाई भने पछी फेरी इटहरी आएर कम्प्यूटर सिक्न थालेको बताउँछन् । तर कम्प्यूटरमा दक्षता हासिल गरी प्रहरीको जागिर भन्दा सामाजिक काम बढी रुची राख्ने सम्राट त्यही समय युथ फर ब्लडका सुनसरी अध्यक्ष भए ।
इटहरी बसेर सानो उमेरमा यहाँसम्म आउने कमै मानिस मध्येका एक सम्राट हुन् । इटहरीबाट सुरु भएको व्यवसाय काठमाडाैं र पश्चिम नेपालगञ्जसम्म फैलिनु आफैमा एउटा सफलता हो । लागनीकर्ता भेटे लाखौंलाई रोजगार दिने उधमी बन्ने सपना बोकेका सम्राट थापाको हिम्मत र उर्जा कहिल्यै घटेको देखिन्न । यस्को राज बारे थापाको छोटो भनाई छ जीवन आफ्नो रोजाई हो ।
असार १९ गते बुबाको फोन आउँदा उनी इटहरीको सरसफाई कार्यक्रममा ब्यस्त थिए । फोन उठाए पछि थाहा भयो प्रहरीको लागि फारम १७ गते बुझाउनु पर्ने थियो । उनी भन्छन, मलाई त मितिसम्म याद भएन । त्यसपछि सिम परिवर्तन गरि इटहरीमा कोठा लिएर बसेका सम्राटलाई घरबाट खर्च पठाउन बन्द भयो । एउटा समाजिक संस्थाको सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष भएपछि कार्यक्रममा जानु पर्ने, चिया नास्ता साथीभाई एकदम गार्ह्रो भयो । केही दिन त डुनट र विस्कुटको भरमा सम्म बसे तर हिम्मत हार्दै गयो । अन्ततः घरमा फोन गर्नैपर्ने अवस्था आयो । घरमा फोन गर्दा कि विदेश, कि गाउँमै शिक्षक नत्र विएस्सी रोज्ने र इटहरी छाड्नुपर्ने अप्सन आयो । उनले बिएस्सी रोजे र धनकुटा गए ।
धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा विएस्सी पढ्न थालेका थापाका एकाएक आफुलाई एक्लो पाउन थाले । इटहरीमा साथीभाई र पदमा रमाएका सम्राट धनकुटामा एक्लो भएपछि उनले धेरै साहित्यिक किताब पढ्न सुरु गरे । त्यस मध्ये एउटा किताब थियो अमर न्यौपानेको करोडौं कस्तुरी । जस्ले सम्राटलाई हिम्मत दियो र एउटा संस्थाले ‘नाम खुलाउन रुचाएनन’ सम्राटलाई बोलाएको संयोग मिलाएर फेरी सिम परिवर्तन गरी अब जिन्दगीमा जस्तो मोड आए पनि नफर्कने संकल्प गरि पुन इटहरी फर्किए ।
तर इटहरी आएपछि उक्त संस्थाले आफ्नो बोली परिवर्तन गर्दा कहाँ जाने भन्ने ठूलो दोधारमा परे । त्यसबखत इटहरीको सामाजिक संस्था युवा बिकास केन्द्रले धेरै सहयोग गरेको र केही दिन त्यही बसे पश्चात उनले युवा बिकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा आफ्नो संस्था ‘सेभ ह्युमन एण्ड ह्युमानीटी’को आयोजनामा “सबैलाई न्योनो अभियान” सुरु गरे । त्यही अभियानको बीचमा ‘कुटुम्ब ब्वाइज होस्टल’का संचालन मिनराज चौलागाइसँग भेट भयो र उनी सहयोगीको भूमिकाका रुपमा कुटुम्ब होस्टल बस्न थाले ।
यी कम्पनीको शेयर खरिद गर्न लाग्यो लगानीकर्ताको भिड ! ३ हप्ता पहिले
सर्वसाधारणलाई आईपीओमा लगानीको अवसर, ३५ लाख कित्ता शेयर आउँदै २ महिना पहिले
वालिङ नगरपालिकाद्धारा कोभिड प्रभावितलाई उद्यमी बनाउने अभियान शुरु ३ महिना पहिले
सञ्चार उद्यमी पोखरेललाई मानार्थ विद्यावारिधि ३ महिना पहिले
किन ढिला आउँछ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको त्रैमासिक रिपोर्ट ? ३ महिना पहिले
एभरेष्ट बैंकको वित्तीय विवरणमा पहिरो, कुनै समयको ब्लूचिप बैंक अहिले आलु चिप्स बन्दै ५ महिना पहिले
लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी, बैशाख १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने १० मिनेट पहिले
दिल्लीका अस्पतामा अक्सिजनको अभाव, खेतबारीमै शवको अन्त्येष्टि गर्न अनुमति ११ मिनेट पहिले
डोटीमा मृतावस्थामा भेटिएकी महिलाको पहिचान खुल्यो १९ मिनेट पहिले
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द २७ मिनेट पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ३१ मिनेट पहिले
बिरामीका लागि कर्णालीमा एम्बुलेन्स र हेलिकोप्टर व्यवस्था ३४ मिनेट पहिले
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह ३६ मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ ४० मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द ४४ मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ ४७ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी ४९ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त १ घण्टा पहिले
राजविराज विमानस्थल दुई साताका लागि बन्द १ घण्टा पहिले
टीकापुर पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा १८ घण्टा पहिले
नेपाल बैंकले बैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने ५ घण्टा पहिले
भिस्वा नाका तस्करीको अखडा, ईन्सपेक्टर बानियाँको सेटिङ बलियो १५ घण्टा पहिले
आजदेखि एमाले मुख्यालय थापाथलीबाट सञ्चालन २३ घण्टा पहिले
इन्डोनेसियामा बेपत्ता ५३ सैनिकसहित नौसैनिक पनडुब्बीको खोजी तिब्र २१ घण्टा पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? १ घण्टा पहिले
अभिनेत्री जेनिफर र रोड्रिगेजबीच ब्रेकअप ७ दिन पहिले
हेटौँडामा कागजको ग्लास उद्योग स्थापना २ दिन पहिले
एसपी प्रवीण र सीडीओ पिताम्बर काठमाडौं तानिए ३ हप्ता पहिले
भारतबाट फर्किएकी ४० बर्षिया महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु ४ दिन पहिले
नयाँ बर्षमा राजु लामाको ‘द मंगोलियन शो’ १ हप्ता पहिले
शनिबार थप १२८ जनामा संक्रमणको पुष्टि ३ हप्ता पहिले
बुधबार ६०३ जनामा कोरोना संक्रमण,उपत्यकाका २५४ जना १ हप्ता पहिले
काठमाडौं उपत्यकाको आकाशमा बाक्लो तुवाँलो ४ हप्ता पहिले
ट्रकको ठक्करबाट देउखुरीमा तीनको मृत्यु ५ महिना पहिले
बच्चालाई कुन उमेरसम्म स्तनपान गराउनु फाइदाजनक ? १ वर्ष पहिले
सिटिजन्स बैंकद्वारा जाजरकोटको विद्यालयलाई एक लाखको आर्थिक सहयोग,शुद्ध खानेपानीमा जोड १ वर्ष पहिले
कुखुरा फार्ममा आगलागी हुँदा १० लाख क्षति १ वर्ष पहिले